समलैंगिकतालार्इ अपराध मान्ने चलन कहिले देखि सुरु भयो ? – जागरणको लागि समाचार
गुगलले गर्याे उत्कृष्ट दश स्मार्टफाेनकाे नाम सार्वजनिक
समानुपातिककाे मतगणना सकियो, कुन दलकाे कति मत?
समलैंगिकतालार्इ अपराध मान्ने चलन कहिले देखि सुरु भयो ?
समलैंगिकतालार्इ लिएर आज पनि विश्वमा अनेक किसिमका कुराहरू सुनिन्छ । कतै यसलार्इ कानूनी अधिकार दिने कुरा चलिरहेको छ भने कहीं यसलार्इ कानूनी मान्यता दिइसकेको छ ।
तर अझै पनि कतिपय ठाउँमा समलैंगिकतालार्इ अपराध मानिन्छ । के तपाइँलार्इ थाहा छ यसको शुरुवात कहाँ र कसरी भएको थियो ? थाहा छैन भने जानी राख्नुहोस् यसको इतिहास ।
समलैंगिक सम्बन्धलार्इ अपराध मान्ने चलनको शुरुवात सत्रौं सताब्दीमा भएको थियो, त्यो पनि एक भयानक विनाशकारी तूफानको कारण ।
३५० वर्ष पहिलेको त्यो भयानक तूफान
कुरो सन् १६७४ को हो । एउटा भयानक तूफान आयो र क्षणभरमै सब तहसनहस बनाएर गयो । यो तूफानले छोडेको बर्बादीको निशानी अझै पनि कैयौं बाँकी छन् ।
करीव ३५० वर्ष पहिले उत्तर-पश्चिम युरोपमा आएको उक्त तूफानले हाहाकार मात्र मच्चाएन, बरु नेदरल्याण्डको सहर युट्रेक्ट ध्वस्त बनाएको थियो । युट्रेक्ट त्यतिबेला समलिंगीहरूको पर्यायको रुपमा चिनिन्थ्यो र अझै पनि यो लागु हुन्छ । समलैंगिकतालार्इ अपराध मान्ने चलनको शुरुवात यसै घटनासँग सम्बन्धित छ ।
सन् १६७२ डच इतिहासको ‘डिज़ास्टर इयर‘
सत्रौं सताब्दीमा नेदरल्याण्ड पहिलेदेखि चुनौतीको सामना गर्दै आइरहेको थियो । फ्रान्सेली एवम् अंग्रेज शक्तिले कैयौं डच उपनिवेशमाथि धावा बोलिरहेको थियो । सन् १६७२ मा फ्रान्स, इंगल्याण्ड र जर्मनी मिलेर डच रिपब्लिकको अन्त्य गर्यो । डच इतिहासमा यसलार्इ ‘डिजास्टर इयर’ को नामले चिनिन्छ ।
रोयल नेदरल्याण्ड्स मेट्रोलजिकल इन्स्टिच्युटका प्रोफेसर जेरार्ड शिरायर भन्छन्- फ्रान्सले डच गणराज्यको सारा सम्पत्ति हत्याएको थियो । नेदरल्याण्डसँग त्यतिबेला कुनै पनि विपद झेल्न सक्ने आर्थिक हैसियत थिएन । त्यसको ठिक दुर्इ वर्षपछि आँधीबेहेरीले युट्रेक्टमा ताण्डव मच्चायो ।
खण्डहरमा भेट्थे समलिंगी जोडी
कैयौं वर्षसम्म पनि भत्किएका घरहरूको पुनर्निर्माण र त्यसका खण्डहरको सरसफार्इ सरकारले गर्न सकेन । किनकि सरकारसँग कुनै पैसा थिएन ।
भनिन्छ, सो खण्डहरमा समलिंगी जोडीहरू आएर भेट्ने गर्थे । यो सिलसिला धेरै वर्षसम्‍म पनि चलिरह्यो । यसको ५० वर्षपछि इसार्इ पादरीहरूले सो विरुद्ध आवाज उठाए र लुकीछिपी भेट्ने समलिंगी जोडीहरूलार्इ सँजाय दिन थाले ।
उक्त घटनाको बारेमा हरकोहीले झट्ट नपत्याउन सक्छन्, तर यसका यथेष्ट आधार र प्रमाणका रुपमा दस्तावेजहरू छन्।
१६७४ को अगष्ट १ बुधबारको दिन थियो । बच्चाको टाउको जत्रा असिना झरे, घरका छानाहरू उडे । तत्कालीन पत्रिकाहरूले मात्र हैन, सर्वसाधारणले पनि उक्त घटनाको बारेमा लेखेका थिए । हाल गरिएको रिसर्च अनुसार ‘बो-इको’ नाम दिइएको उक्त आँधीले ‘द डोम चर्च’ लार्इ खण्डहर बनाएको थियो जसको पुनर्निर्माण पछि मात्र भएको थियो । बिबिसीबाट ।